निराकार कमल बिहीबार, भदौ ३१, २०७८
काठमाडौं– त्यो समय ‘साथी’को थियो। त्यो समय ‘साथीहरु’को थियो। र थियो, साथीहरुले देखेको ‘सपना’को।
‘साथी’ अर्थात्, नेपाली हिपहप संगीतको क्षेत्रमा कोशेढुङ्गा सावित भएको यम बुद्धको गीत। ‘साथीहरु’ अर्थात् यम बुद्ध र बालेन शाह। र, ‘सपना’ अर्थात् नेपालमा ‘हिपहप रियालिटी शो’ गर्ने उनीहरुको सपना।
यम बुद्ध बालेनसँग भेट्दा सधैँ भन्थे– हामीहरु मिलेर एउटा र्याप रियालिटी शो गर्नुपर्यो यार!
बालेनलाई पनि नेपालमा एउटा हिपहप रियालिटी शो हुनुपर्छ भन्ने लाग्न थालेको थियो। त्यसैले, उनी यम बुद्धको कुरामा सही मात्र थप्दैनथे, शो गर्न आफूले सकेको गर्ने प्रण पनि गर्थे।
त्यसो त बालेन र यम बुद्धको दोस्ती सानैदेखिको हो। उनीहरु अनामनगरस्थित एउटै स्कुलमा पढ्थे। स्कुलमा हिपहप म्युजिकको राम्रो माहोल थियो। यम बुद्ध उनको सिनियर थिए। तर, दुवैमा हिपहपप्रतिको मोहले गर्दा उनीहरुबीचको सिनियर–जुनियरबीचको सम्बन्ध मेटियो र त्यो साथी साथीमा परिणत भयो। त्यसपछि उनीहरु एकअर्कालाई आफ्नो रुचि सेयर गर्न थाले। रुचिसँगै विस्तारै आआफ्नो र्यापर बन्ने सपना पनि सेयर गर्न थाले।
एसएलसीपछि उनीहरुको कलेज र विषय फरक भयो। भेटघाट पातलिँदै गयो। केही वर्षपछि यम बुद्ध उच्च शिक्षाका लागि विदेश गएपछि त उनीहरुबीच फाट्टफुट्ट हुने भेटघाट पनि पूरै टुट्यो। उनीहरुबीच यदाकदा इन्टरनेटको माध्ययमबाट कुराकानी भने भइरहन्थ्यो।
सन् २०११ मा यम बुद्धले ‘साथी’ गरे, विदेशबाटै। गीत एकदमै चर्चित भयो। जतातता उनी छाए। कहिल्यै र्याप नसुन्नेहरुको जिब्रोमा पनि ‘साथी’ झुन्डियो।
‘साथी’ रिलिज भएको केही समयपछि नै यम बुद्ध नेपाल फर्किए, यतै बस्ने गरी। बालेन र यम बुद्धको मित्रता फेरि एकपल्ट झांगिँदै गयो।
यम बुद्ध हरदम नेपालमा हिपहप संगीतको दायरा फराकिलो र व्यवसायीक बनाउने सपना देख्थे। त्यसका लागि रियालिटी शो एकदमै आवश्यक रहेको उनी मान्थे।
‘अब उसले देखेको सपना उसको मात्र थिएन, त्यो हामी दुवैको सपना भइसकेको थियो। हामीहरु रियालिटी शोबारे छलफल गरिरहन्थ्यौँ,’ बालेन २०१३ तिर फर्किए, ‘यसै क्रममा सुरुमा उसले र बार्ज नामक र्याप ब्याटल गर्ने योजना बनायो।’
‘र बार्ज’ एकदमै चर्चित भयो। देशका विभिन्न स्थानबाट र्याप पारखीहरु ब्याटलमा सहभागी हुन आए। यही ब्याटलले धेरै र्यापरलाई चिनाएन मात्र, स्थापित नै गरायो। बालेन स्वयं पनि एक हुन्।
हिपहप संगीतप्रति मानसिहरुमा रुचि र लगाव देखेर यम बुद्ध आफूले देखेको सपना पूरा हुनेमा अझै आशावादी भए। उनी अझ गम्भीर भएर यसबारे साथीहरुसँग परामर्श गर्न थाले।
‘नेपालमा हिपहप म्युजिकको राम्रो माहोल छ। मानिसहरुलाई र्याप पनि उत्तिकै मन पर्छ। तर, नेपालमा न हिपहप प्रतियोगिता हुन्छ, न यो विभिन्न संघ संस्था तथा रेडियो–टिभीले आयोजना गर्ने म्युजिकल अवार्डमा नै समेटिन्छ,’ यम बुद्धले आफूलाई भनेको कुरा बालेन सम्झिन्छिन्, ‘राम्रो धनराशीको पुरस्कारको व्यवस्था गरेर हामीले एउटा शो आयोजना गर्न सक्यौँ भने एकदमै राम्रो हुन्थ्योे। त्यो पैसाले एउटा आर्टिस्टको सपना पूरा हुन्थ्यो, उसले आफ्नै पैसाले एम्बम निकाल्न सक्थ्यो।’
तर, आफ्नो सपनाले आकार नपाउँदै यम बुद्ध कहिल्यै नफर्किने गरी संसारबाट बिदा भए। यम बुद्धले संसार छाडेर गए पनि आफूले उनीसँग गरेको प्रणले बालेनलाई सधैँ झक्झक्याइरह्यो, सधैँ चिमोटिरह्यो।
केही वर्षहरु अन्यौलतामै बिते।
करिब दुई वर्षअघि एकदिन बालेन र गिरिश खतिवडाबीच यस विषयमा कुराकानी भयो। उनको कुरा सुनेर गिरिशलाई एकदमै उत्साहित बनायो। गिरिशलाई पनि एउटा हिपहप रियालिटी शोको अभाव धेरै पहिलेदेखि नै खड्किरहेको रहेछ।
त्यसपछि बालेन र गिरिश गृहकार्यमा जुटे। केही महिनाको अहोरात्र खटनपछि शोको ढाँचा तयार भयो। ढाँचासँगै नाम पनि जुर्यो। नेपहपको श्रीपेच! तर, कोरोनाका कारण केही समय काम अगाडि बढ्न सकेन।
भाद्र ४ देखि १५ गतेसम्म, डिजिटल अडिशनको मिति तय भयो।
यति छोटो समयमै ७ हजार बढीले अडिशनका लागि भिडियो पठाए, जुन उनीहरुले कल्पना गरेको भन्दा धेरै थियो।
‘हामीले बढीमा २ हजारले डिजिटल अडिशन दिन्छन् भन्ने अनुमान गरेका थियौँ,’ बालेनले सुनाए, ‘तर ७ हजार बढीले दिनुभयो। यसले हामीलाई थप उत्साहित बनाएको छ।’
नेपालमा हिपहप संगीत एकदमै मौलाइसकेको र धेरै व्यवसायिक पनि भइसकेको रहेछ। यो कुरा नेपहपको श्रीपेजका जुन संख्याले अडिशन दियो त्यसले पनि पुष्टि गर्छ। प्रशासन र सत्ता बाहेक हिपहपलाई सबैले बुझ्दै र मन पराउँदै गएको उनको बुझाइ छ।
भन्छन्, ‘नेपालमा अहिलेसम्म सत्तामा एकाधबाहेक अधिकांश इमान, नौतिकता, मानवता नभएका बाँदरहरु पुगेका छन्। उनीहरुले न नागरिकको चाहनालाई बुझेका छन् न त कलालाई नै। हिपहप म्युजिकले प्रशासन र सत्ताका कर्तुत र विसंगतीहरुलाई उदांगो पारिदिने हुनाले हरेक सत्ता र्यापसँग डराउँछ, यसलाई बन्देज गर्न खोज्छ।’
हिपहप गीतका शब्दहरु अश्लील भए, छाडा भए भनेर दुई वर्षअघि र्याप गायक समीर घिसिङ उर्फ भिटेनलाई प्रहरीले पक्राउ गर्यो। केही दिनअघि मात्र फेरि भिटेनलाई प्रहरीले गीत रिलिज गर्नुअघि शब्द जाँचपास गराउनु भन्दै आदेश दियो। प्रहरीले आफूलाई स्वतन्त्त रुपमा गीत गाउन पनि नदिएको भन्दै भिटेन आक्रोशित भएका थिए।
‘यो देशका प्रशासक र सत्ताहरु आफ्नो छरपष्ट देखिने अश्लिल कतुर्तहरु देख्दैनन्, तर र्यापरले छाडा शब्द बोल्यो भनेर जेलमा हाल्छ। यो कलाप्रेमीहरुका लागि ठूलो विडम्बना हो। हिपहप संगीत पनि कलाको अन्य विधा जस्तै आफूलाई अभिव्यक्त गर्ने एउटा सुन्दर र शसक्त माध्यम हो भन्ने कुरा सत्ताले बुझ्न आवश्यक छ।’ सत्तालाई उनको सुझाव छ।
नेपहपको श्रीपेचकोलाई लिएर बालेन एकदमै सकारात्मक र उत्साहित हुनुको अर्को कारण छ, शो मौलिक र यसको फर्म्याट यथेष्ट समय र रिसर्च गरेर बनाइनु।
नेपहपको श्रीपेच नेपालकै मौलिक शो हो। यो फ्रेन्चाइज होइन।
‘र्पाय कल्चर संसारभर नै राम्रो भए पनि रियालिटी शो एकदमै कम छन्। यसो हुँदा त्यस्तो चलेको फ्रन्चाइज शो छैनन्,’ उनले सुनाए, ‘फ्रेन्चाइज भए पनि हामी लिँदैनौँ, आफैँ, आफ्नै बनाउँछौँ भनेर हाम्रो टिमले यसमा धेरै मेहनत गरेको छ।’
त्यसो त नेपालमा र्याप रियालिटी शो गर्ने प्रयास धेरैले गरे। तर, अहिलेसम्म कुनै पनि अगाडि बढेनन्। उनी आफ्नो शो सफल हुनेमा पूर्ण रुपमा विश्वस्त छन्। शो नेपाली हिपहप क्षेत्रमा कोशेढुङ्गा नै सावित होस् भन्ने कामना छ।
‘यतिमात्र होइन, हामी चाहन्छौँ यो शो अन्य देशलाई पनि मन परोस् र उनीहरुले हामीबाट फ्रेन्चाइज लिउन्। हेर्दै जाऔँ, के हुन्छ,’ उनले भने, ‘सबैभन्दा धेरै यसले यम बुद्धले सधैँ देखेको तर गर्न नपाएको सपना पूरा गरोस्।’
शोमा निर्णायकको भूमिका उनी र गिरिशले निर्वाह गर्नेछन् भने बिट र ध्वनी निर्माणको काम मिस्टर लेजीले गर्नेछन्। त्यस्तै इजी ट्वएम्भ, कविजी, बाइजेन र मिस्टर डी मेन्टरको भूमिकामा रहनेछन्।
पहिलो चरणमा डिजिटल अडिसन दिएका ७ हजारबाट ५०० लाई छनौट गरेको छ। दोस्रो चरणमा फिजिकल अडिशनबाट ती ५०० प्रतिष्पर्धीबाट ४० जनालाई छनौट गरेर अर्को चरणमा लगिनेछ।
कक्षा १२ को परीक्षा चलिरहेकाले ‘फिजिकल अडिशन’ तत्कालै गर्न नसकिएको उनले बताए। कक्षा १२ को परीक्षा सकिनेबित्तिकै प्रतिष्पर्धा अगाडि बढ्नेछ।
फिजिकल अडिशन नेपालका मुख्य ६ शहर काठमाडौं, पोखरा, नेपालगञ्ज, इटहरी, बुटवल र चितवनमा हुनेछ।
शोको एउटा कडा नियम छ, शब्द, संगीत र स्वर सब आफ्नै हुनुपर्ने, अरुको गीत गाउन नपाइने, डिजिटल अडिशनदेखि नै।
शोको विजेताले रु १० लाख र दोस्रो हुनेले रु ५ लाख पाउनेछन्।
बालेनका अनुसार तेस्रो हुनेलाई के–कति दिने वा नदिने भन्ने निर्णय अहिले भइसकेको छैन, छिट्टै निर्णय गरिनेछ।
शो फिजिकल अडिशनदेखि एक्सन स्पोर्टर्स, सरोकार टिभी, डी म्युजिक र डिसहोमबाट प्रशारण हुनेछ।
#नेपहपको_श्रीपेज #बालेन_शाह #यम_बुद्ध
प्रकाशित मिति: बिहीबार, भदौ ३१, २०७८ १२:२२